‘विगतका सहमति स्विकार्दा एकता बच्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘विगतका सहमति स्विकार्दा एकता बच्छ’
'एकतालाई बचाउने कुरामा पार्टी कमिटीभित्र भूमिका खेल्न पाउने परिस्थिति नहुँदाको परिणाम हो यो ।'
'समीक्षा गर्ने बिन्दुमा नेकपा आइपुगेको छ ।'
काठमाडौँ — केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेपछि सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ । ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले राजीनामा मागेपछि नेकपाको भविष्य र ओलीको पदको निरन्तरतामाथि आशंका उब्जिएका छन् । नेकपाभित्र यो परिस्थिति के कारणले उब्जियो ?
यही विषयमा केन्द्रित रहेर पार्टी एकता प्रक्रियाका सबै छलफल र सहमतिका साक्षीसमेत रहेका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपा जुन स्पिरिटमा एक भएको थियो, अब त्यो एकताबाट बाहिर जान थालेको हो ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा एकता भएको हो । संविधानको स्पिरिट र जनताको चाहनालाई पक्रेर अघि बढ्ने भन्ने हो । यहाँसम्म आइसक्दा मुख्य नेताहरूबीच अन्तरविरोध प्रकट भयो । त्यसैले समस्या व्यहोरेका छौं । अहिले पनि हिजो जे थिए, ती सहमति पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।
विगतमा सहमति गर्दा कतिपय सैद्धान्तिक र कतिपय पदीय जिम्मेवारीका कुरा थिए । तिनै जिम्मेवारीका कुरा नमिल्दा अहिले समस्या आएको हो ?
एकता गर्दा त्यो मर्म बुझेका, लागेका हामीले एकतालाई बचाउने कुरामा पार्टी कमिटीभित्र भूमिका खेल्न पाउने परिस्थिति नहुँदाको परिणाम हो यो । अब अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने विगतका सहमति स्विकार्दा एकता बच्छ । तर त्यो सहमतिमा जाने मनस्थिति र मनोविज्ञानमा नेताहरू नभएकाले यस्तो समस्या आयो ।
आजको अवस्थामा नेकपाभित्रको समस्या कुन बिन्दुमा छ ?
अहिले छलफलको चरणमा छौं । कसका के समस्या हुन् भनेर पहिचान गर्ने ठाउँमा नेकपा छ । समस्या कसका कति छन्, देशको आवश्यकता र जनताको माग के हो, जनता र देशको आवश्यकताअनुसार पार्टी अघि बढ्यो कि बढेन, सरकारबाट त्यसका लागि पहलकदमी भयो कि भएन भन्ने समीक्षा गर्ने बिन्दुमा नेकपा आइपुगेको छ ।
समीक्षा गर्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने खालका कुरा पनि आएका छन् नि ?
मिटिङमा त आ–आफ्नो विचार व्यक्त हुन्छन् । मिटिङमा आफ्नो कुरा स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाइन्छ । ती सबै कुरा आएपछि के निष्कर्षमा पुग्ने हो भन्ने टुंगो लाग्छ । हामी छलफलकै क्रममा भएकाले कुनै निष्कर्ष निकालिसकेका छैनौं ।
स्थायी कमिटीका धेरै नेताले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनिसकेका छन् । अब यो अडान यही रूपमा अघि बढ्छ कि केही पुनर्विचार भएको हो ?
ती छलफलमा आएका कुरा हुन् । एउटै भाषामा कुरा आएको छैन । आ–आफ्नो तर्क र भाषा छन् । समस्या छन् भन्ने विचार व्यक्त भएको हो । ती विचारलाई एक ठाउँमा राखेर कहाँ–कहाँ सच्याउनुपर्छ, कहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सच्याएर जाने ठाउँमा पुग्ने हो । पार्टीको प्रक्रिया यही हो । त्यहाँ पुग्न छलफलको क्रम जारी छ । बैठकको अन्त्यमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । पार्टी आन्दोलन र जनताको माग आवश्यकता र भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अध्यक्षद्वयले संश्लेषण गर्नुहुन्छ । कुन कुरा सच्याउने, कुन कुरामा यसरी जानुपर्छ भन्ने दुई अध्यक्षको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुराले पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । खासमा अहिले कुरा मिल्नेतिर गएको छ कि भत्कनेतिर ?
पार्टी फुट्दैन । पार्टीमा छलफल बहस हुनु भनेको फुट्नु होइन । छलफल बहसमा लागेका कुरा राख्ने भनेको एकताको आधार तयार गर्ने नै हो, एकता र रूपान्तरणको आधार तयार गर्न जिम्मेवार बनाउने हो । कमीकमजोरी सच्याउने हो । नेपाली जनता र कार्यकर्ताले फुट चाहेका छैनन् । जनता र कार्यकर्ताको मनोविज्ञानअनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण र एकताको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने हो । त्यसो भएर हामी त्यो प्रयासमा छौं ।
अब एकताको नयाँ शिरा के हुन्छ त ?
एकता प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आउँदा भएका कमजोरी के–के हुन्, त्यसमा कसको कति कति भूमिका छ भन्ने स्पष्ट गर्छौं । बदल्ने कुरा के हो भन्ने प्रस्ट गर्छौं । नयाँ ढंगले जाने प्रतिबद्धता गर्छौं ।
यतातर्फ जान कसले कस्तो त्याग गर्नुपर्छ ?
कम्युनिस्ट पार्टीमा छलफल बहस खुला हुन्छ, औपचारिक हुँदैन । संश्लेषण नयाँ उचाइमा हुन्छ । त्यसैले समग्र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छ । विविध तर्क–वितर्क उठ्दा तरंगित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
राजीनामाको विषय छलफलबाटै मिल्न सक्छ ?
राजीनामाको कुरा आउँछ, रूपान्तरणको कुरा आउँछ । अन्य सबै कुरा आउँछन् । उठेका विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउँदा कहाँ पुगिन्छ, त्यो बेला भन्न सकिन्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नेकपा विभाजन सम्भव छैन’
प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०८:३०
घर पठाइएका संक्रमितको अनुगमन भएन
प्रदेश ५ मा हालसम्म ३,७७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा १,४०५ जना घर गइसकेका छन् । उनीहरू के गर्दैछन् भन्ने न स्थानीय तहलाई छ, न त प्रदेश सरकारलाई ।
असार १९, २०७७ मनोज पौडेल, अमृता अनमोल, ठाकुरसिंह थारु
कपिलवस्तु, रुपन्देही, बर्दिया — कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–८ खोरियाका ६ जना संक्रमितलाई आइसोलेसनबाट घर पठाएको दुई साताभन्दा बढी भयो । संक्रमण पुष्टि भएपछि १४ दिन आइसोलेसनमा बसे । त्यस क्रममा लक्षण र चिह्न नदेखिएको र बिरामी नभएको जनाउँदै घर पठाइएको थियो । उनीहरूको दोस्रो र तेस्रो पटक पीसीआर परीक्षण गरिएन ।
महाराजगन्ज नगरपालिका हरदौनाका चार जना संक्रमितलाई पनि १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर डिस्चार्ज गरियो । बाहिरी रोग र लक्षण नदेखेको भन्दै उनीहरूलाई घर पठाइएको थियो । उनीहरू गाउँघरमा हेलमेल भएर परिवारसँग बसेका छन् । उनीहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले एक साता घरमा छुट्टै बस्न भनेका थिए । उनीहरूले अटेर गरेका छन् । घर आएपछि अलग्गै बस्नुपर्ने नियम पालना गरे/नगरेको कसैले अनुगमन गरेको छैन । ‘आइसोलेसनबाट पठाएपछि फलोअप छैन,’ मायादेवी गाउँपालिकास्थित भैसकुण्डाका बलिउद्दिन मुसलमानले भने, ‘उनीहरू परिवार र गाउँमा घुलमिल भएका छन् । निस्फिक्री हिँडडुल गरिरहेका छन् ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय पालिकाले परीक्षणबिनै घर पठाइएकाको ‘फलोअप’ गरेका छैनन् । उनीहरूले घर फर्केर के गरिरहेका छन्, कसैलाई सरोकार छैन ।
संक्रमण व्यापक हुन नदिन ‘ट्राभल हिस्ट्री’ लिएर संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपथ्र्यो । सात सयभन्दा बढी संक्रमित हुँदा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिइएको छैन । सुरुमा यशोधरा, मायादेवी गाउँपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकाका केही सीमित संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो । डेढ महिनायता कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छैन । जिल्ला र स्थानीय तहका जनशक्ति क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा खटिनुपर्दा सघन रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र भगतले बताए । ‘ट्रेसिङ छुटाउनै नहुने काम हो,’ उनले भने, ‘तर समयमा गर्न सकेनौं ।’ अब सुरु गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । ‘समुदायमा संक्रमणको चिन्ता छ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘हामी बल्ल योजना बनाउँदै छौं ।’
कपिलवस्तुमा ७१ महिलासहित ७ सय ३६ जना संक्रमित छन् । त्यसमध्ये ६ सय ६९ जना घर फर्किसकेका छन् । यीमध्ये दोस्रो र तेस्रो पटक गरिएको स्वाब परीक्षणमा दुवै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि संक्रमणमुक्त भएका ४२ जना मात्र हुन् । गत जेठ २४ गते सरकारले १४ दिन आइसोलेसनमा बिताएर लक्षण र बिरामी नभएकालाई घर पठाउने निर्देशिका लागू गर्‍यो । त्यसपछि अधिकांश आइसोलेसन रित्तिएका हुन् । उक्त निर्देशिका जारी हुनुपूर्व संक्रमितको दोस्रो र तेस्रो पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने गरिएको थियो ।
कोरोना भाइरस हटस्पट मानिएको कपिलवस्तुमा बिहीबारसम्म ६७ संक्रमित मात्र आइसोलेसन सेन्टरमा छन् । ‘स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन खाली गराउन कारण चाहिएको थियो,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘सरकारको नयाँ नीति आएपछि सोचेजस्तै भयो ।’ अहिले जिल्लाका १० मध्ये चार स्थानीय तहका आइसोलेसन र पाँच स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन खाली भएका छन्् । अहिले पाँच स्थानीय तहका ३६ क्वारेन्टाइनमा ३ सय २६ जना रहेका छन् ।
रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–१, रामनगरका उदयराज लोध र अशोक लोध अहिले घरमै छुट्टै बस्नुपर्थ्यो । एक साता घरमै सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने सर्तमा पाँच दिनअघि आइसोलेसन सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएका थिए । घर पुगेको अर्को दिनबाट काममा खटिएका छन् । दैनिक परिवारका अन्य सदस्यसँगै खनजोतमा व्यस्त हुन्छन् । खेतीपातीको सिजन भएकाले काम नगरी सुख छैन । तर, सामाजिक दूरीको मतलब गर्दैनन् । लोध दाजुभाइजस्तै जिल्लामा घरमा आइसोलेसनमा बस्ने गरी डिस्चार्ज गरिएका धेरै संक्रमितले सामाजिक दूरीको बेवास्ता गरेका छन् । दैनिक काममा खटिएका छन् ।
संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका बाँकेका तीन जनालाई बिहीबार परीक्षण नगरी घर पठाइएको छ । बर्दियाका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका ५७ जनालाई पनि बुधबार घर पठाइयो । बाँके र बर्दियामा १४ दिन राखेर बिनापरीक्षण घर पठाउन थालेपछि समुदायमा त्रास बढेको छ । यसरी पठाइएका व्यक्तिले भने परीक्षण माग गर्दै आएका छन् । ‘मेरो आरडीटी नेगेटिभ आयो । तर, सँगै बस्ने साथीको पीसीआर पोजिटिभ देखियो,’ बर्दियाको राजापुर नगरपालिको आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले भने, ‘त्यसपछि मेरो स्वाब जाँदा पोजिटिभ रिपोर्ट आयो । १४ दिन बसेपछि घर पठाए । पीसीआर परीक्षण गरेर घर पठाएको भए ढुक्क भइन्थ्यो ।’
चिकित्सकले बिदाइ गर्दा एक सातासम्म होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिने गरेका छन् । यसरी घर गएका व्यक्ति बसे/नबसेको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । खेतीपातीको समय भएकाले उनीहरू परिवारसँग काममा जुटेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले नयाँ निर्देशिकाअनुसार संक्रमितलाई घर पठाइरहेको बताए । दुई साता आइसोलेसनमा राखेपछि कुनै लक्षण नदेखिए घर पठाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख रहेको उनले बताए । ‘निर्देशिकाअनुसार घर पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको अनुगमन पनि भइरहेको छ ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीले मन्त्रालयको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । ‘घर पठाउँदा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधपुछ गर्छौं । कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिए घर पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘लक्षणबिना परीक्षण नगर्नु भनेपछि हामीले जाँच गर्ने कुरै भएन ।’ बाँकेका १ सय ११ क्वारेन्टाइनबाट १० हजार ३ सय ५२ जना घर फर्किएका छन् । अहिले ३ सय १६ जनामात्रै क्वारेन्टाइनमा छन् । बाँकेमा ३ सय ६३ जना संक्रमित छन् । तीमध्ये ३ सय २७ घर गइसकेका छन् । बर्दियामा अहिले ८ सय ८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । १३ हजार १ सय २२ जना क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किसकेका छन् । आइसोलेसन सेन्टरमा ३९ संक्रमित छन् । १ सय ३७ संक्रमितलाई घर पठाइएको छ ।
प्रदेश ५ मा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल र १ सय २७ वटा आइसोलेसन सेन्टर रहेका छन् । बिहीबार दिउँसोसम्म प्रदेशभरि ३ हजार ७ सय ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ५ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर गइसकेका छन् । यसरी घर गएका संक्रमितहरू के गर्दैछन्, त्यसको जानकारी न स्थानीय तहलाई छ, न त प्रदेश सरकारलाई । प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले १४ दिन आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितबाट कोरोना नसर्ने भएकाले निगरानी नगरिएको बताए ।
‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० देखि १२ दिनपछि नै शरीरमा कोरोना भाइरस भए पनि नसर्ने पुष्टि गरेको छ । लक्षण नदेखिएका संक्रमितबाट अरूमा नसर्नेसमेत बताएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ती व्यक्ति कहाँ छन्, के गर्दैछन् भन्नेमा निगरानी गरिएको छैन ।’ उनले मानसिक भय हटाउन आइसोलेसनबाट गएपछि सामाजिक दूरी कायम राखेर नियमित काम गर्दा समस्या नहुने दाबी गरे ।
प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०८:०८